တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းလမ်းကြောင်းမြေပုံ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီတူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းလမ်းကြောင်းမြေပုံ
05 / 08 / 2019 Levent Ozen 06 တူရကီ, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, Maps, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ် YHT လမ်းကြောင်း 1
တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုလမ်းကြောင်းမြေပုံ:9Sincan တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအတွက်ရပ်တန့်, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova Sapanca, Izmit, Gebze နှင့် Pendik ဖြစ်ခဲ့သည်။ တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို Pendik နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်၏ဆင်ခြေဖုံးအတွက် Marmaray လိုင်းသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။ အာရှဥရောပကနေချောမွေ့စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ပေး။
ရရှိနိုင်ပင်လွတ်လပ်သောတူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, 533 ကီလိုမီတာရှည်လျားသော မြန်နှုန်းအရသိရသည် 250 km / h အပေါင်းတို့, လျှပ်စစ်နဲ့ signal ကိုသစ်ကိုကို double-ကိုခြေရာခံမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်။
စီမံကိန်းပြီးစီးအပေါ်သို့တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားသုံးနာရီသို့လျှော့ချလိမ့်မည်။ အဆိုပါ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာအတွက်ရထားလမ်းခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၏လမ်းကြောင်း 78 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း, Marmaray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူချောမွေ့စွာ Integrated ဥရောပကနေအာရှပေးလိမ့်မည်။ ဤစီမံကိန်းနှင့်အတူမြို့ဆက်သွယ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ၏နှစ်ခုအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ, လူမှုရေး, စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖလှယ်ပါဝင်သည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ် YHT Project မှပြန်ကြားရေး
အဆိုပါစီမံကိန်းကို 8 သီးခြားကဏ္ဍများပါဝင်သည်;
တူရကီ Sincan: 24 ကီလိုမီတာ
ကျန်း Esenkent: 15 ကီလိုမီတာ
Esenkent Eskisehir: 206 ကီလိုမီတာ
2.679 မီတာ: မှတဆင့် Eskisehir ဘူတာ
Eskisehir Inonu: 30 ကီလိုမီတာ
Inonu Vezirhan: 54 ကီလိုမီတာ
အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုတူရကီ, Eskisehir, တူရကီ - Sakarya လမ်းကြောင်း
Vezirhan Köseköy: 104 ကီလိုမီတာ
Köseköy Gebze: 56 ကီလိုမီတာ
Haydarpasa Gebze: 44 ကီလိုမီတာ
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းနှစ်ခုအဆင့်ပြီးစီးရန်။ ယခုနှစ် 2009 တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်။ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ပေးသောစီမံကိန်းဒုတိယအဆင့်။ Köseköy Gebze ၏အခြေခံဇာတ်စင် 28.03.2012 အပေါ်ချပစ်လေ၏။
ကျန်း Esenkent နှင့် Esenkent-Eskisehir လိုင်းစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။
Bursa အတွက်ဘတ်စ်ကားလိုင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု (နယူးလမ်းကြောင်းမြေပုံ) 06 / 05 / 2013 35, 43H, D5 နှင့်4/ IR လိုင်းများအားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို run နိုင်ရန်အတွက် Bursa လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်အပြောင်းအလဲစေခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်ပြောင်းလဲသွားအခြားတစ်ဖက်တွင်လက်ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပြဿနာတစ်ခုမြူနီစီပယ်ကြာကြာ, လက်စွပ်အထိရောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရည်မှန်းနေသည်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Bursa အတွက်ရထားလမ်းစနစ်, အသစ်သောလမ်းများ, အဏ္ဏဝါနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ 35, 43H, D5 နှင့်4/ IR လိုင်းများလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယျ။ တနင်္လာနေ့, မေလ6စည်းမျဉ်းသစ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းလမ်းကြောင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျအရကတည်းက: 35 မှ ...
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းနယူးလမ်းကြောင်း 02 / 10 / 2018 အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကြီးပါမောက္ခတွင်ပါရှိသောအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်စီမံကိန်းကိုဖော်ပြချက်အပေါ်တစ်စက်2နာရီကနေတူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ် ဒေါက်တာ တူရကီရဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနမှဌာန၏ YHT Duzce တက္ကသိုလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မဟာဌာနမှူး, ဌာနအဖွဲ့ဝင်ပါမောက္ခနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲကြောင်း float ဟု ဒေါက်တာ Ayhan Samandar, ထိုသူတို့ကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်အကြားတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်း။ ဤစီမံကိန်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ4နှစ်ပေါင်း Samand, သင်အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုကမ်းလှမ်းထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန်ဆရာစီမံကိန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူတို့တူရကီ YHT Samand နှင့်အတူမျှဝေနံနက်ပိုင်းတွင်အားလုံးအသေးစိတ်ကိုအကြောင်းကိုရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ ယခုရရှိနိုင်သည့်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်ကနေ6ခရိုင် CITY Training မှ2...
အရာအကြား Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား! လမ်းကြောင်းဖော်ထုတ် 07 / 10 / 2015 အရာအကြား Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား! လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မည်: Samsun သတင်းအားပေးစရာသို့ရောက်ကြ၏။ တူရကီအကြား Samsun မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Samsun-တူရကီအစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းအားပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီးပေးသောလမ်းကြောင်းအပေါ်အဘယ်မှာရှိရက်စွဲဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းရထားလမ်းစီမံကိန်း၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်စီစဉ်ထား Samsun-တူရကီရထားလမ်းလိုင်း၏ရှည်လျားသော Samsun-Kirikkale လမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် 450 ကီလိုမီတာဖြစ်လိမ့်မည်။ တူရကီနှင့် Samsun ၏နောက်ဆုံးရပ်နားအဆုံးအဖြတ်စဉ်2နာရီအတွင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အရာစီမံကိန်း, တစ်ဘူတာဟာပေါ့ပလာပင်နှင့်ရေဝေရေခရိုင်နေသူများကဖန်တီးပါလိမ့်မည်အကြား Samsun မြန်နှုန်းရထား။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာရှည်လျားသည့်ဝတ်လစ်စလစ် 450 ကီလိုမီတာတွင်တည်ရှိနိုင်အောင်ဆောက်လုပ်ထားခံရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက "နဲ့ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ...
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုသစ်စီမံကိန်း Bursa သစ်ကိုလမ်းကြောင်းများ 06 / 05 / 2016 အသစ်သောစီမံကိန်းများကိုမှသစ်ကိုလမ်းကြောင်း၏ Bursa မြန်နှုန်းမီးရထားလမ်း: ဒီဇင်ဘာလ 23 စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်စီမံကိန်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်၏ 2012 တစ်ဦးခမ်းနားအခမ်းအနား Yenisehir TCDD ကနေဖြတ်ကူးဖို့စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့်မှမလာပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဒီပြဿနာနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ခဲ့တယ်နူးညံ့ကျော်လွှားခဲ့သည်။ လကျထကျ 540, 240 ရက်ပေါင်းအလိုရှိသောစီမံကိနျး၏အဆုံးတိုင်အောင်အပြီးစီးရန်ဖြစ်သော်လည်း Osman မှမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားချိတ်ဆက်မှု၏ဆောက်လုပ်ရေးပေးပါသည်။ AK ပါတီ Bursa လက်ထောက်များနှင့်ပါလီမန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ Huseyin Sahin လမ်းကြောင်းအပေါ်နောက်ဆုံးနေရာချထားအချက်များထဲမှတစ်ခုတည်းမြေပုံအမှတ်အသားပြုထားကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ရွာနောက်ကွယ်မှထို့ကြောင့်အဆိုပါSelçiklerပြီးနောက် ... oh တောင်သို့၎င်း, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားDüzmeşနှင့် Orhaniye ပြီးနောက်မြောက်ဘက်သွားလာကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့် ...
Haydarpasa - ပြုပြင်ရေး၏အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရန်တူရကီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတန်ဖိုးရှိလမ်းကြောင်း, ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်မြေပုံ၏ချွတ်နုပြင်ဆင်မှုရွှေ့ဆိုင်း 18 / 06 / 2015 TCDD2။ ခရိုင် Haydarpasa - တူရကီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းစက်ပြုပြင်ရေးများအတွက်လမ်းကြောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖယ်ရှားခြင်း, နူးညံ့သောပြင်ဆင်နေတိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်နှင့်ချွတ်မြေပုံ၏ဖန်တီးမှုတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)2ရွှေ့ဆိုင်း။ ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတျတမျးတငျထား - "313 + 431-551 + စက် 406 အတွက်ပြုပြင်ရေးများအတွက်လမ်းကြောင်းတန်ဖိုးထုတ်ပေးရေး, တိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်၏ဖန်တီးမှုနှင့်ချွတ်မြေပုံပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကိုအကြံပေးန်ဆောင်မှုတူရကီလိုင်းမိုင်အကွာအဝေးHaydarpaşa" သောအဆိုပါဒေသတွင်းပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နုနေ့စွဲဇွန်လ 10 2015 ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံး Pre-ရွေးကောက်ပွဲကိုအယူခံ 16 2015 ဇွန်လအဖြစ်ကြေညာခဲ့တယ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်, နှုန်း 1.000 ...
လက်ရှိတူရကီရဲ့အမြင့်မြန်နှုန်းရထားမြေပုံအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ site ကိုလိုက်နာပါ!
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းနယူးလမ်းကြောင်း
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုသစ်စီမံကိန်း Bursa သစ်ကိုလမ်းကြောင်းများ
Haydarpasa - ပြုပြင်ရေး၏အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရန်တူရကီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတန်ဖိုးရှိလမ်းကြောင်း, ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်မြေပုံ၏ချွတ်နုပြင်ဆင်မှုရွှေ့ဆိုင်း
Haydarpasa - လမ်းကြောင်း၏ဖယ်ရှားရေးများအတွက်တင်ဒါများအစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းစီမံကိန်းစက် preselection လျှောက်လွှာ, ထိုတန်ဖိုးများကိုပြုပြင်ဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်
Haydarpasa - အလိုအလျောက်ပြုပြင်ရေး၏ဖယ်ရှားရေး, တိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်၏ဖန်တီးမှုနှင့်တီးဝိုင်းမြေပုံ၏ပြင်ဆင်နေနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကိုမှတူရကီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတန်ဖိုးရှိလမ်းကြောင်းစုဆောင်းခဲ့ကြ
Haydarpasa - အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းစီမံကိန်းစက်ပြုပြင်ရေးများအတွက်လမ်းကြောင်းတန်ဖိုးဖယ်ရှားရေးများအတွက်တင်ဒါများဘဏ္ဍာရေးစာအိတ်ဖွင့်လှစ်